धामीले उजाडेको दलित बस्ती | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
बुटवल । धामीले उजाडेको दलित बस्ती सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । हाम्रो समाज अझै पनि कुन दुनियाँमा छ ? गुल्मीको मदाने गाउँपालिका एक टोल अझै बोक्सी, धामी झाँक्रीको विश्वास र त्रासमा मानिसहरू बाचिरहेका छन् । एउटी धामी काम गर्ने महिलाले ‘यो टोल अशुभ छ । अब छिटै क्रमशः सबै मर्छौ’ भनेपछि मानिसहरू गाउँ छाडेर अर्कै स्थानमा बसाई सरेका छन् ।
सबै गरेर करोडौँको सम्पत्ति खेर फाल्दै विस्थापित गराउने ती धामी काम गर्दै आएकी महिलाको मृत्यु भई सकेको उनीहरूले बताए पनि आधिकारिक निकायबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । उनले धेरै वर्ष देखि हेरखोर गर्दै आएको जानकारी धेरैले दिए । यसरी धामी झाँक्रीका कारण धेरैको अकालमा ज्यान गएको सुनिँदै आए पनि सिङ्गो बस्ती नै छाड्नु परेको घटना यस भेगमा यो पहिलो हो ।
मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष माधव भुसाल भन्छन् –‘ उनीहरूमा जनचेतनाको कमी हो । उनीहरू फर्केर आउँछन् भने हामीले पुन स्थापित गर्न सहयोग गर्दछौँ । बाख्रा पालन लगायत आय आर्जन मूलक कार्यक्रमहरू पारेर उनीहरूको जीवन स्तर उकास्छौं । उनीहरू फर्केर आउन हाम्रो अनुरोध छ । ’
त्यसै स्थानका केही दलित समुदायको यति बेला घर चुहिने भएर त्रिपाल टाँगरेर कष्टकर बसाई बसेका छन् । यस सम्बन्धमा मदाने गाउँपालिका प्रमुख दानबहादुर केसीको हामीले ध्यानकृष्ट गराएका थियौँ । चिटिक्क परेका घर गोठहरू छन् ।
उनीहरूले जस्ता पाता मात्रै निकालेर लगेका छन् ती घरहरूमा जस्ताले छाई दिन सके अरू घरबार विहीनहरूलाई बसाल्न सकिन्थ्यो नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख केसीले भने –‘एकदम ठिक भन्नु भयो । हामीले ती घरहरू छाएर संरक्षण गर्ने र घरबार विहीनहरूलाई बसाल्ने काम गर्नेछौँ । ’
समाचारधामीले उजाडेको दलित बस्ती
एभरेष्ट बैंकमा रकम जम्मा गर्दै गर्दा रकम लुटियो